सूचना प्रविधि Archives » Janata Voice
access_time १५ फाल्गुन २०७८, 1:22 am
रामेछाप । खाँडादेवी गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जिल्ला मा नै पहिलो पटक निःशुल्क फाईबरनेट सेवा सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्र रहेका ७९ वटा सामुदायिक विद्यालय र ३४ वटा…
access_time ११ माघ २०७८, 4:53 am
सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामासँग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको नाताले बनाएको व्यक्तिका रुपमा तपाईको अनुभव के छ ? नयाँ संवैधानिक संरचना अनुसार नेपालमा तीन वटा सरकारहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसमा मैले…
access_time १९ कार्तिक २०७७, 10:39 am
कार्तिक १९ रामेछाप। सविना कार्कीगोकुलगंगा गाउँपालिकाका नागरिकहरू नेपाल टेलिकमको कार्यशैली र हेलचेक्राई देखेर आजित भएका छन् । गत साउन महिनादेखि मोबाइलको नेटवर्क र एडिएसएल इन्टरनेटमा आएको समस्या आज सम्म समाधान भएको छैन । स्थानीय उमेश…
access_time २१ असोज २०७७, 3:02 am
बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड–१९ सम्बन्धी लेखेको पोस्टलाई ट्विटरले लुकाइदिएको छ भने फेसबुकले पनि डिलिट गरिदिएको छ । सो पोस्टमा उनले कोरोना भाइरस फ्लुभन्दा धेरै कम हानिकारक हुने दाबी गरेका थिए । जुन…
access_time २० असोज २०७७, 7:44 am
शिक्षामार्फत् व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास हुने प्रक्रियाका चार खम्बा छन्, सिक्ने, सिकाउने, सिक्न पठाउने र सिक्नका लागि वातावरण बनाउने । यी चार खम्बाको व्यवहार सन्तुलनले नै शिक्षाको घर अपेक्षित हुने हो । तर, जिम्मेवार चारमध्ये तेस्रो…
access_time १८ असोज २०७७, 12:57 pm
तपाईंहरुले कहिल्यै याद गर्नुभएको छ ? घडीको विज्ञापनमा सँधै १०ः१० बजाइएको हुन्छ। प्रायजसो घडीका विज्ञापन हेर्दा घडीको रुपरंग, आकार प्रकार तथा मूल्यमै हाम्रो ध्यान जान्छ । शो–रुममा घडी किन्न जाँदा पनि डिस्प्लेमा राखिएका घडीमा कति…
access_time २ असोज २०७७, 8:36 am
बिजुलीबाट चल्ने लामो दूरीको मिनिबस सेवा शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । भवलक्ष्मी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले पहिलोपटक लामो दूरीमा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याएको हो । काठमाडौँबाट रामेछापको जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीसम्म दैनिक रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी आजबाट सेवाको…
access_time १८ भाद्र २०७७, 1:47 am
१८ भदौ, काठमाडौं । भारतले चीनमा विकसित पबजीसहित ११८ मोबाइल एप्सलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । सीमा क्षेत्र लद्दाखमा चीनसँग तनाव सिर्जना भएलगत्तै भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चीनमा बनेका मोबाइल एप्सहरु आफ्नो देशमा नचल्ने बनाएको हो…
access_time १५ भाद्र २०७७, 6:30 am
भदाै १५ । जनता भ्वाइस सम्वाददाता रामेछाप । नेपाल टेलिकमले प्रवाह गर्ने इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिन थालेपछि एडिएसएल प्रयोगकर्ताहरुले सो समस्याका बारेमा गुनासो गर्न थालेका छन् । महिनामा कम्तिमा पनि ४–५ दिन मन्थलीमा रहेको टेलिकमको…
access_time १२ भाद्र २०७७, 2:03 am
माइक्रोसफ्टको कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम विन्डोजले २५ वर्ष पूरा गरेको छ । २५ वर्षअघि सन् १९९५ अगष्ट २४ का दिन माइक्रोसफ्टले पहिलो प्रयोगकर्तामैत्री विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको रुपमा विन्डोज ९५ ल्याएको थियो । कम्प्युटर जगतमा निकै ठूलो…